သတင်း - Stainless Steel ဂဟေပိုက်များကို ဂဟေဆော်ရာတွင် အဆိုပါပြဿနာများအတွက် ဂရုပြုရပါမည်။
သံမဏိဂဟေပိုက်စက်ဖြင့် ကြိတ်ပြီး သေဆုံးပြီးနောက် သံမဏိ သို့မဟုတ် သံမဏိပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။Stainless steel welded pipe ၏ အရည်အသွေးအာမခံချက်၏သော့ချက်မှာ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ အသုံးမပြုမီ စက်ရုံထဲသို့ ကုန်ကြမ်းအားလုံးကို စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသွင်အပြင်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊ အနံတိုင်းတာခြင်းနှင့် အထူသည် တူညီပါသည်။ထို့အပြင်၊ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် tensile စမ်းသပ်မှု, ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီအရည်အချင်းပြည့်မီစစ်ဆေးပါ။သို့သျောလညျး, အမှန်တကယ်သံမဏိဂဟေပိုက်၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်, မကြာခဏဤသို့မဟုတ်ထိုပြဿနာပေါ်လာပါသည်။ဒါဆို Stainless steel welded pipes တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ။Stainless steel welded ပိုက်တွေမှာ ဒီပြဿနာတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ။ဤတွင် စာရေးသူသည် သင်နှင့်အတူ အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
သံမဏိဂဟေပိုက်စက်ရုံ၏ ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသော ပြဿနာများမှာ- အရည်အသွေးမပြည့်မီသော ဂဟေချုပ်ရိုး၊ မပြည့်စုံသော ဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် လောင်ကျွမ်းခံရခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းနှင့် ချွေးပေါက်များဖြစ်သည်။တိတိကျကျပြောရလျှင်၊
1. အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ဂဟေဆော်ခြင်းသည် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသော လည်ပတ်မှုနည်းပညာကို မှားယွင်းစွာရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။weld ၏ အမြင့် နှင့် အနိမ့် အကျယ် ကွာခြားသည် ၊ ထို့နောက် weld ၏ ပုံသဏ္ဍာန် သည် အလွန် ကောင်းမွန် သည် ၊ weld ၏ နောက် ဘက် သည် concave ဖြစ် ကာ weld သည် အလွန် အားလျော့ သွားစေ သည် ၊ မလုံလောက်။
2. မပြည့်စုံသောဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသောဂဟေဆက်ခြင်းဖြင့် လောင်ကျွမ်းရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအကြောင်းရင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်- ပထမ၊ လက်ရှိ သေးငယ်လွန်းပါသည်။ဒုတိယ၊ လည်ပတ်မှုနည်းပညာသည် မကျွမ်းကျင်ပါ၊ ဂဟေဆော်သည့်အမြန်နှုန်းသည် မြန်လွန်းသည်၊ တင်ပါးရှင်းလင်းမှုသည် သေးငယ်သည်။အကွေးသည် ရှည်လွန်းသည် သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်နှင့် မညီပါ။ဂဟေဝိုင်ယာကြိုးနှင့် အခြေခံသတ္တုကို ရောနှောခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် ဂဟေသတ္တုကို ပြည်တွင်းတွင် ရောနှောခြင်းမရှိပါက၊ အစိတ်အပိုင်းကို အချိန်မီ ပြုပြင်သင့်သည်။မီးလောင်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ဂဟေဆော်သည့်လျှပ်စီးကြောင်း အလွန်အကျွံကြောင့်ဖြစ်သည်။သွန်းသောရေကန်၏ အပူချိန်သည် အလွန်မြင့်မားသည်။ဂဟေဝိုင်ယာကြိုးကို အချိန်မီမထည့်ဘဲ၊ အမြှောင်းတင်ပါးရှင်းလင်းမှုသည် ကြီးလွန်းသည်။ဂဟေဆော်မှုအရှိန်က အရမ်းနှေးတယ်။ဤအခြေအနေများသည် ဂွမ်းပေါ်တွင် တစ်ချက် သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ်ဖောက်ထွက်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့မှသာ ဂွမ်း၏အားပျော့သွားကာ လောင်ကျွမ်းသွားစေရန်ဖြစ်သည်။
3. အက်ကြောင်းများနှင့် ချွေးပေါက်များ (1) ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ပြဿနာမှာ အက်ကြောင်းများဖြစ်သည်။အက်ကွဲကြောင်းကွဲပြားမှုအရ ယေဘူယျအက်ကွဲကြောင်းများကို ပူသောအက်ကြောင်းနှင့် အေးသောအက်ကွဲဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ဓာတ်တိုးအရောင်ရှိသော ပူသောအက်ကွဲကြောင်းများသည် သတ္တုအရည်၏အပူချိန်တွင် အပူချိန်တွင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲအဆင့်မျဉ်းထက် အနည်းငယ်နိမ့်ကျသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။Cold crack သည် အအေးခံထားသော အက်ကွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး တောက်ပသောအရိုးကျိုးခြင်းနှင့် အစိုင်အခဲအဆင့်အသွင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျံ့နှံ့သွားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါဝင်မှု နှင့် အလွန်အကျွံ ဂဟေဆက်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် တောက်ပသောအရိုးကျိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်တိုးခြင်းအရောင်မညီခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ဂဟေဝိုင်ယာကြိုးများကို စံမမီပါက၊ အပူချိန်မြင့်မားသော ဂဟေဆက်သည့်အချိန်သည် ရှည်လျားလွန်းသဖြင့် ဓာတ်တိုးခြင်း၊ အပူလွန်ကဲပြီး ပုံဆောင်ခဲအရွယ်အစား အလွန်အကျွံ ကြီးထွားလာခြင်း၊ ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်က အညစ်အကြေးများ ပိုများလာခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်က မာကျောလွယ်သော်လည်း၊ အက်ကွဲရန်လည်း ပိုများသည်။(၂) ဂဟေအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဂဟေဝိုင်ယာများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆီစွန်းထင်းခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် သံချေးများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့သည် သန့်စင်မှုနည်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် အရည်ပျော်ခြင်း၊ ရေကန်သည် မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် oxidized ဖြစ်ပြီး၊ splash နှင့် အခြားသော အခြေအနေများတွင် porosity ထွက်လာရန် လွယ်ကူသည်။အထက်ဖော်ပြပါ ပြဿနာသုံးခုသည် stainless steel ဂဟေပြွန်ထုတ်လုပ်သူများ၏ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။